80 casharro saamayn qoraal ah oo loogu talagalay Photoshop | Abuurista khadka tooska ah
Adobe Photoshop ayaa xambaarsan muddo ka badan 25 sano naga yaabisay aaladaha shaqada ee awood u leh inay na siiso. Barnaamijkan waxaan ku abuuri karnaa curisyo iyo saameyn aan caadi aheyn oo ku dhex mara khalkhal galinta sawir dijitaal ah iyo shaqo kastoo muuqaal ah (oo ay kujiraan sawirada dhaqdhaqaaqa). Laakiin haddii aan awoodno inaan ka dhigno codsigan xoogga leh mid ku habboon barnaamijyada kale ee ka socda Adobe, waxaan ku guuleysan doonnaa natiijooyin xirfadeed oo badan. Sidaan ognahay, horumarinta qoraalka iyo farta ayaa ah wax miisaan weyn ku leh dhismaha aqoonsiga soo jeedin kasta, sidaa darteed, gaar ahaan adduunka xayeysiinta, shaqada noocan oo kale ah waxay qaadataa muhiimad gaar ah.
Waxaa si weyn lagugula talinayaa inaan isku dayno inaan dib u eegno softwaresyada ugufiican ee maanta sida buuxda aan uheleyno (haa, qaarbaa bilaash ah kuwa kalena waa qaali ama mushaar). Haddii aad rabto inaad naftaada u hurto adduunka waraaqaha ama aad ku quusato naqshadeynta qaabeynta, waxaan kugula talin lahaa inaad isticmaasho dadka waaweyn sida Cinema 4D, muujiye, iyo xitaa ku dhiirran inaad tijaabiso barnaamijyada sida rinji Tool Leaves, asal ahaan Jabbaan oo aad u fudud laakiin waxtar leh oo dabcan leh codsiyada sida Lightroom ama sidoo kale Adobe After Effects haddii aad rabto inaad u booddo adduunyada animation-ka oo aad rabto inaad nolol iyo firfircooni siiso mashaariicdaada. Maanta waxaan ku soo qaadaneynaa booqasho gaaban oo ku saabsan saameynta ugu yaabka badan ee Adobe Photohop iyadoo gacan ka heleysa nashqadeeyayaal kala duwan oo si isdaba joog ah ula qeybsaday webka maxay yihiin hababka lagu gaarayo tayo wanaagsan iyo natiijo dhiirigelin leh.
1 Saamayn noocee ah ayaa lagula taliyaa mashruuc kasta?
1.1 Astaamo iyo sumadayn
1.3 Maqal iyo Muuqaal
2 Xulista aasaasiga ah
Saamayn noocee ah ayaa lagula taliyaa mashruuc kasta?
Waana taas maanta waxaa jira dhammaan noocyada mashaariic ee leh baahiyo gaar ah. Isku mid noqon mayso haddii aan wajahno naqshadda daboolka sheeko, boodhadhka xayeysiinta ee filim gaaban iyo wax intaa ka sii yar haddii aan nafsadeena u hurayno adduunka aqoonsiga shirkadaha iyo horumarinta xalalka muuqaalka ee la jaan qaadaya aqoonsiga shirkadaha iyo macaamiisha aan u shaqeyno. Xaaladda dambe waxaan leenahay macno taxane ah sida fudeyd buuxda iyo sahlanaanta akhriska iyo aqoonsiga dadka isticmaala, wax gaar ahaan adduunka xayeysiinta iyo dhiirrigelinta dhacdooyinka iyo alaabooyinka inta badan la iska ilaalin doono. nuances iyo faahfaahin.
Sababtaas awgeed, waxaan kugula talinayaa haddii aad uboqoto adduunyada naqshadeynta oo aad soo jiidato shaqadan noocan ah, marka hore isku day inaad isku diiwaan geliso heer guud iyo wixii ka sarreeya oo dhan baaro nooca mashruucyada u socda waax kasta iyo mid kasta kiiska. Haddii aad u shaqeyso macmiil oo aad u baahan tahay inaad la kulanto dalabyo gaar ah, waxay muhiim u tahay inaad tixgeliso kuwaas oo ah astaamaha ay tahay inaad ilaaliso iyo kuwa ay tahay inaad horumariso ama aad kaligaa abuurto si aad ugu darto culeys fikradeed oo dheeraad ah aqoonsiga su'aasha laga qabo Warbixinta kooban ayaa ah dukumiinti aad muhiim ugu ah nolol maalmeedka naqshadeeye garaaf ah maxaa yeelay waxay naga caawin doonaan inaan soo uruurino dhammaan macluumaadka aan uga baahanahay macmiilkayaga iyo mashruuca aan horumarin doonno. A Warbixinta ayaa naga caawin doonta inaan saxno iyo inaan u siino macaamiisheenna sida saxda ah waxa ay raadinayaan. Waa inaad xaqiijisaa marka lagu daro u-hoggaansanaanta isbeddelka shirkadda ama macmiilka, waa inaad bixisaa astaamaha farsamo ee la doonayo si natiijadu u dhaqanto. Dabcan, markii aan guda galnay howsha dukumintiyada oo aan kala soo baxnay tilmaamaha ku saabsan waxa aan u baahanahay, waxaa la joogaa waqtigii aan hagaajin lahayn oo aan nolol iyo hal-abuur u siin lahayn fikradaha horay ugu jiray qorshaheenna aragti iyo istiraatiijiyadeed.
Maanta waxaan diirada saari doonaa wajigan ugu dambeeya iyo Waxaan kaa caawin doonaa soo jeedimaha qaarkood oo ku siin doona qadar dheeraad ah oo dhiirigelin ah si aad u horumariso shaqo wanaagsan. Haddii aad isku dayeyso inaad barato sida loo abuuro waxtar leh, saameyn xirfadeed oo qoraal ah, waxaad timid meesha saxda ah. Maanta waxaan la wadaagi doonnaa xulasho ballaaran oo saameyn ah casharradooda kala duwan oo ah qaab casharro loogu talagalay Adobe Photoshop, Illustrator iyo Cinema 4D. Haddii aad xirfadle tahay ama haddii aad isku baraysid aaggan, waxaan hubaa in layliladani ay wax badan kaa faa'iidi doonaan maxaa yeelay iyaga ayaad ku dhammaystiri doontaa farsamadaada oo aad baran doontaa barashada tabaha cusub iyo nidaamyada shaqada ee kaa dhigi doona xirfadle iyo dhammaystirto xirfadahaaga. Sidaad u aragto, heerka shaqada mid kasta oo ka mid ah tusaalayaashu way ka duwan yihiin. Haddii ay dhacdo inaad naftaada u soo bandhigto naqshad, waxaa lagugula talinayaa inaad ku bilowdo laylisyada aasaasiga ah oo aad si tartiib tartiib ah u kordhiso heerka.
Kahor intaanan u gudbin xulashadeena, waa in la ogaadaa in layligani aanu kujirin af Isbaanishka, inbadan oo kamid ahna ay kujilaan Ingiriis, sidaa darteed waxaa si weyn lagugula talinayaa inaad hesho turjubaan ama qalab aad sifiican ugu fahmi karto, in kastoo dhammaantood lagu daro sawirro kala geddisan oo muujinaya tallaabada tallaabada tallaabo tallaabo tallaabo tallaabo ah u qaadaysa, sidaa darteed waxaan hubaa inay si weyn kuugu fududaan doonto inaad ku qabsato mid kasta oo ka mid ah laylihan qaab casharro ah.
Iyadoo aan waxbadan la dhihin, Waxaan rajeyneynaa inaad iyaga ka heshay waana ku xasuusinaynaa haddii uu jiro xiriir jaban, noo soo sheeg si aan u saxno wax dhibaato ah, inkasta oo aynaan awood u lahayn inaynu wax uun qabanno haddii qoraaga asalka ah ee nuxurka ka kooban uu go'aansaday inuu ka saaro laylisyadiisa shabakadda. Iyaga ku raaxee!
Astaamo iyo sumadayn
Minimalism-ka ayaa ku adkaaday qaabeynta astaamaha iyo aqoonsiga shirkadeed. Waxaa laga yaabaa inay tahay dhammaan meelaha aan arki doonno, waa midka na siinaya astaamo qeexan iyo khadadka horumarka. Khadadkiisu aad ayey u fududahay in la saadaaliyo, waa inaan istaagno si aan u falanqeyno howlaha uu astaanta fulinayo. Shuruudaha ugu muhiimsan ee astaanta nooc kasta oo astaan ​​ah ay tahay inay buuxiso badanaa waa:
Dammiin a kala duwanaanta ganacsiga ay mataleyso.
Waa inay noqotaa mid fudud la aqoonsan karo, ilbiriqsiyo gudahood waa in nuxurka la soo qabtaa.
Waa inay noqotaa khuseeya dhammaan noocyada taageerooyinka, xaalad kasta, halabuur iyo qayb kasta.
Goobtu aad bay u ballaadhan tahay oo ma leh "xaalado" waxqabad ama wax ku ool ah oo badan. Haddii aan aasaasi karno hordhac, waa awoodda ay u leedahay inay saameyn ku yeelato oo aan ugu istaagno deegaanno ay macluumaad ka buuxaan. Kakanaanta kakooban, markaa, badanaa wey badantahay maxaa yeelay waxay ubaahantahay culeys badan oo ku saabsan maareynta sawirka iyo soosaarka dijitaalka ah. In kasta oo naqshadda fidsan ay ku adkaatay naqshadeynta aqoonsiga shirkadeed fudeydkiisa iyo codsi fudud, xayeysiinta saamaynta kakan iyo saddex-cabbir aad bay uga sii badan yihiin.
Fiidiyowga dhexdiisa waxaan dhihi karnaa taas "fowdo" ayaa xukuma sababta oo ah dhammaan khadadka qaabdhismeedka ayaa ah kuwo shaqeynaya oo gebi ahaanba waxtar yeelan kara. Waqtiyadii ugu dambeeyay, naqshadeynta walxaha iyo minimalism waxay ku heleen niche muhiim ah oo ku saabsan naqshadeynta garaafka ee lagu dabaqay fiidiyaha. Tani sidoo kale wax badan ayey ku leedahay xaqiiqda ah in calaamadeynta iyo aqoonsiga shirkaddu ay ka gudbeen xudduudda oo hadda iyo in ka badan oo noocyada shirkadaha ahi ay u boodayaan adduunka fiidiyowga si ay naftooda u horumariyaan.
Xulista aasaasiga ah
Saameyn fudud oo dhiig dareere ah
Saamaynta tijaabada: Waraaqaha midabada leh ee sawirka leh
Qoraal ku dhiirrigeliyay Isku dhaca Dhibaatooyinka Titans
Lumpy saameyn ku muujiyey Adobe Illustrator
Saameynta Retro ee qaabka qaansada
Saameynta 3D ee casriga ah iyo font gacanta lagu qoray
Saamaynta diyaaradda biyaha ee Adobe Photoshop
Xarfaha saddex-geesoodka ah waxay saameyn ku yeeshaan cirka
Saamaynta guridda iyo neon
Qoraalka gundhigga loogu talagalay boorarka ganacsiga
Nooca Retro qoraalka vectorized
Saamaynta dahsoon ee lumay
Saamaynta qoraalka mugdiga iyo grunge
Qoraal fudud oo leh alwaax
Saameynta Qoraalka fudud ee Neon by abduzeedo
Fudud, saameyn adag oo muuqaal ah
Sida loo qaabeeyo qaab lugaha qaab fudud
Warcraft waraaqaha dahabka saamayn
Qoraal qoraal ah oo saameyn leh
Abuur saameyn nuurad ah oo loogu talagalay astaanta sawirka
Saamaynta xagaaga oo saddex-geesood ah
Abuur saamayn qoraal ah oo u eg mosaic Adobe
Saamaynta wareegga saddex-geesoodka ah
Naqshadaynta qoraalka fikradda ee saamaynta iftiinka leh
Waraaqaha qiiqu waxay saameyn ku yeeshaan Adobe Photoshop
Abuuritaanka xarfaha saddex-geesoodka ah
Tuubooyinka kiimikada oo ah saamaynta qoraalka
Waraaq saameyn leh nalalka neon
Saamaynta xarafka xarig
Saamaynta dhulka ee Adobe Photoshop
Nalalka Neon waxay saameyn ku yeeshaan asalka
Saamaynta qoraalka rootiga
Saamaynta retro ee muuqaalka leh
Mugga iyo saamaynta iftiinka
Qaab-dhismeed saddex-geesood leh oo leh saameyn gradient
Saamaynta saddex-geesoodka ah ayaa leh xiddigo dagaal
Madow iyo caddaan saameyn saddex-geesood ah
Nooca sawirku wuxuu ku milmay guri dhismihiisu socdo
Saamaynta qaabeed ee qarsoon ee cirka
Nalalka Neon ee la geliyey qaab qorista
Xarfaha dahabiga ah waxay saameyn ku yeeshaan iftiinka iftiinka
Waraaqaha saddexda geesood ee dahabka ah ayaa saameyn leh
Shukulaatada valentine saamaynta
Saamaynta qoraalka lakab
Saamaynta jiilaalka oo saddex-gees ah
Waraaqo alwaax leh oo saddex-cabbir midab leh
Saamaynta deyrta oo saddex-geesood ah
Saameyn ku yeelatay dhibco neecaw
Rooti xaleef saamayn
Saameynta waqtiga xagaaga
Caramel saamaynta textured
Saamaynta balaastigga ah ee saddex-geesoodka ah
Qoraallada saameynta barta
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » 80 casharro saamayn qoraal ah loogu talagalay Photoshop
NOOCOOYINKA XAFLADAHA IYADOO MUUQAAL AH, SI AAD U MUUQATO
Jawaab JAVIER ARIZA
Aad baad u mahadsantahay !! Way fiican yihiin inay wax badan i caawiyeen, shaqadayda iskuulka !! Mahadsanid !!!
Dhammaantiin waad salaaman tihiin, waa wax cajiib ah sida aad u abuurtaan naqshadahan.
wax u gaar ah oo asal ah waan kugu hambalyeynayaa ...
iyo sidoo kale, runtii waxaan jeclaan lahaa inaad iga caawiso inaan yeesho mid ka mid ah nashqadahaas
loogu talagalay kaarka bandhigga laakiin leh magaca qaab macaan, oo af Ingiriisi ku ah SWEET ESTYLE ...
Waxaan jeclaan lahaa inaan lashaqeeyo si ay wax un uqabtaan bn chevre ...
aad baad u mahadsantahay…. waana kugu hambalyeynayaa
Haye, sidee tahay, waxaan kaliya doonayaa inaan kuugu hambalyeeyo nashqadahaan waaweyn, kuwa aan ugu jeclahay waa naqshadaha dabka
Iyagu waa macallimiin cajaa'ib leh, waxaan kaliya ii oggolaan doonaa inaan indha indheyn ku sameeyo, ereyada qaarkood ay adeegsadaan ma fahmin sababta
Waad salaaman tihiin noocyadan qabow ee aad maqasheen waxaad u maleyneysaa inaad dhigi kartid sida loo sameeyo si sawiro badan ay u sameeyaan weedh fas
Dhammaantood waa kuwa cajaa’ib leh guud ahaan, laakiin ma isticmaali karo maxaa yeelay kuma aqriyi karo Isbaanish
oo ah daliilkii ugu da'da weynaa
Aad u Fudud Download Google Chrome Inuu kuu turjumayo
U turjun adiga Google LOOOOOOOOOL
Jawaab RETRO GZ
Gali tarjumaanka google-ka ah haddii aad la socoto google chrome way kuu shaqeyn doontaa adiga, waxaan rajeynayaa inay aniga ii shaqeyneyso.
adeegso cusbooneysiinta biraawsarka chrome, halkaasna si toos ah ayaa loogu tarjumay
Ku jawaab juancore
Way fiican yihiin, hadda inay ku dhaqmaan hahaha
Casharro aad u fiican ayaa waxtar weyn leh, Hambalyo
Waan jeclaa wax walba maxaa yeelay taasi waxay u baahneyd dulqaad
wax badan samee; wax badan buu naga caawiyaa att: francisco yataz
Ku jawaab francisco yataz
Ku jawaab marko
Cesar Faarax Romero dijo
Runtii way fiicantahay!
Jawaab Cesar Farah Romero
wanaagsan taasi, waxaan halkaan ku ahay dugsiga, salaan ayaan u dirayaa 12-ka
Jawaab Miguelito Messi
Abuur qoraal qurxoon oo saameyn ku leh en.gfto.ru
7 nooc oo xirfadleyaal ah ama xarfaha loogu talagalay naqshadeeyayaasha